Ejiri akwụkwọ ọla kọpa chọọ ya mma - cm. L40 x 58h - (DFL) - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ Chandeliers Appre mma na ọla kọpa epupụta - cm ...
Home / shop / ọkụ / Chandeliers / Applique mma na ọla kọpa epupụta - cm. L40 x 58h - (DFL)
Eji mma na ọla kọpa epupụta - cm. L40 x 58h - (DFL) buru ibu
okporoko: 806881881789 Category: Chandeliers Product ID: 20029
Atụ mma na epupụta - Size cm. L40 x 58h - Type Socket E14 - Max wattage 40 - 3 Number nke Ìhè - Type bọlbụ HSGSC / G - Class m - IP 20 - Usoro ọkụ ala - Nnọọ Mkpa: Ndi ike agbanyụrịrị. All arụmọrụ ga-rụrụ site na a pụrụ iche na ẹkesikpede - Mgbanwe ma ọ bụ tampering nwere ike ime ka ngwaọrụ ize ndụ. The ụlọ ọrụ na-anabata ibu ọrụ ọ bụla maka mmebi kpatara ya onwe ngwaahịa ruo eruo bụghị dị na ntụziaka. (DFL)
okpokoro n'uko na n. 5 ọkụ - nkwụnyeghị ọkụ - cm. 60 x 60 x 30h - agba ọcha - dakọtara na bọmbụ nke klas; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)